Condo Sale in Sanchaung (ID-658) အား စမ်းချောင်း တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Condo Sale in Sanchaung (ID-658)
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : ၄၇ရက်​
Near Bagaya Road in Sanchaung Township, 1500 sqft condo area for sale. Condo has Living-room, One Master Bed-room, One Single Bed-room, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Parquet in Living-room and Bed-rooms. Tiles in Kitchen and Bath-rooms. Four air-conditioners are already included.
SALE PRICE - 1650 Lakhs (Nego)
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ဗားကရာလမ်းအနီးရှိ ၁၅၀၀စတုရန်းပေအကျယ်ရှိသောရောင်းရန် ကွန်ဒိုဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ဒိုအိမ်ခန်းအတွင်း ပါကေးများခင်းကျင်းထားသည့် ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် တစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် တစ်ခန်း၊ ကြွေပြားများခင်းကျင်းထားသည့် ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နင့် ရေချိုးခန်းများ ဖွဲ့စည်းပါဝင်ပါသည်။ လေအေးပေးစက် လေးလုံးအသင့်တပ်ဆင်ပါရှိပါသည်။ ကွန်ဒိုအိမ်ခန်း၏ အရောင်းဈေးနှုန်းမှာ - သိန်း ၁၆၅၀ (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
For Rent Condo on Tamwe Township...
FOR RENT Condo at Dagon township
Stylish & traditional two-be...
အမည်: Condo Sale in Sanchaung (ID-658)